Kaar Caafimaad iyo COVID-19 | LawHelp Minnesota
Kaar Caafimaad iyo COVID-19
Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2021/2/12
Covid-19: Sidee ayaan isaga baari karaa iyadoo lacag la’aan ah cudurkan?
Iska Baarida cudurka COVID-19 ee reer Minnesota waa mid lacag la’aan u ah cid walba oo halkan ku nool. Waa lacag la’aan hadii aad kaar caafimaad haysato iyo haddii kaleba. Haddii aad kaar caafimaad haysato, waxaa dhici karta in lagu waydiiyo akhbaarta kaarkaaga caafimaadka kolka lagu baarayo. LAAKIIN ma aad bixinaysid adigu kharashka baaritaanka, shirkada kaarkaaga caafimaadka ayaa bixinaysa. Haddii wax lacag ah lagugu soo dalaco, wac shirkada kaarkaaga caafmaadka si aad ugu sheegto khaladka.
Hel goob la is ku baaro oo kuu dhow adiga: https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp
Ka waran hadii aanan haysan kaar caafimaad?
Hadii aadan haysan kaar caafimaad, gal shabakada www.MNSure.org. Caadiyan, kaarka caafimaadka waxaad heli kartaa uun xilliga "mudadda isqorida furan" LAAKIIN, cidii walbaa waa isqori kartaa xilligan Mudadda Isqorida Gaarka ah ee Xaaladdan Degdega ah oo ka bilaabmi Febraayo 16 - Maajo 17, 2021.
Xasuusnow: Hadii aad xaq--uleedahay kaararka MA ama MNCare, waa aad isqori kartaa markii aad rabtid sannadka oo dhan - ma jiraan "isqorida furan" xadidaadyo ahi.
Waxa aad ka codsan kartaa MA ama MNCare kaligaa khadka (online) hadii aad rabto. Aad bay u fududahay in la sameeyo taa. Waxaad sidoo kale gargaar ka heli kartaa qof hage ah. Hagahu waxa uu kaa caawin karaa sameynta hawsha oo dhan.
Degmo/deegaan walba ee gobolka waxaa ka jira liis hagayaal daryeelada caafimaadka ah oo la heli karo waxa ayna ka jawaabi karaan su’aalo badan oo ku saabsan xaq u yeeladkaaga, sida qorshahu u shaqeeyo iyo xataa tilmaamo ku saabsan sida ay u isticmaali karaan kaararka caafimaadka dad aan waligood horey u lahaan jirin kaar caafimaad. Gal shabakada: https://www.mnsure.org/assets/2019-MNsure-Navigator-Map-English_tcm34-350572.pdf
Hadii aadan haysan Sooshal Sakuurati [Social Security Number (SSN)] waa khasab inaad la kulanto hage ama aad tagto xafiiska adeegyada bulshada ee degmadaadda si aad u buuxiso codsi.
Hadii aadan heli karin MA ama MNCare iydoo sababtu tahay sharci la’aan awgeed laakiin aad leedahay astaamaha hargabka ama kuwa cudurka COVID-19, tag isbitaalada qaybtooda daryeelada degdeg ah (ER) si laguu baaro laguuna daaweeyo. Waxay kaa caawin karaan sida loo codsado EMA.
Ciddee ayaan wici karaa hadii aan qabo su’aalo ku saabsan COVID-19?
Hadii aad qabto su’aalo ku saabsan sida ay tahay xaalada guud ee Minnesota ee cudurkan (virus), waxyaabaha aad sameyn karto si aad ugu diyaar garwdo cudurka (virus) ka ama waxyaabo kale, la xiriirida iyo akhbaar kale:
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health)
Khadka (Hotline) COVID-19: 1-800-657-3504
oo la heli karo Isniinta – Jimcaha, 9 subaxnimo ilaa iyo to 4:00 galabnimo.
Rugaha Xakameynta Cudurrada (Centers for Disease Control)
khayraadyada u gaarka ah COVID-19
Heegan u ahaanta Xaaladaha degdega ah